Fampiofanana efitrano ao Gurgaon - Sekoly Tech
Fikarakarana efitrano fianarana ao Gurgaon
Innovative Technology Solutions dia manana birao foibe Gurgaon. Ny ITS dia voalohany amin'ny fampiofanana amin'ny IT, fiofanana sy orinasa mpanome tolotra. ITS Tech School manome fiofanana any Gurgaonho fampiroboroboana ny orinasam-pianakaviana manan-karena miaraka amin'ny foto-drafitrasam-pahaizana momba ny toetr'andro sy toeram-pamokarana avo lenta araka ny filàna ara-teknika ara-teknika.
Fandefasana toerana fivarotana any Gurgaon
Manana maromaro ny ITS efitrano fianarana any Gurgaon izany hoe any South City 1, Star Mall sy Sector - 14 izay akaiky ny Centre Huda City, Iffco Chowk sy MG Metro. ITS dia manana 13 Fiofanana hofan-trano any Gurgaon ary afaka mandray ny mpandray anjara 270 amin'ny iray andro. NY Fampiofanana any Gurgaondia manana milina faran 'ny farany ambony, sarin-drakitra mipetaka sy fotsy fotsy.
Ampio amin'ny fahombiazanao manokana
Gurgaon dia ivontoerana Corporate sy IT ao amin'ny renivohitra nasionaly (NCR) ao India. Gurgaon miaraka amin'ny akaiky an'i NH-8 Express, any amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena, manolotra tsara indrindra ny fampivoarana ara-barotra ho an'ny kilasy, tanjona ara-barotra tena izy. Gurgaon no ivon'ny orinasa MNC sy BPO, toy ny Aricent Group, IBM, EMC2, Microsoft, Oracle, Accenture, Genpact, TCS, NIIT, Sapient, Wipro ary orinasa marobe hafa napetraka ao Gurgaon. ITS dia manome fanofanana orinasa ary efitrano fianarana ho an'ny orinasa lehibe rehetra ao Gurgaon.
Ho an'ny birao mailaka info@itstechschool.com
B-100 A, Atsimo-Andrefana 1, Opp Sector -29 Huda Gymkhana Club, Gurgaon - 122002